Ny Solosaina Findain’ny Solombavambahoaka sy ny Maripahaizana Lisansy ho an’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2018 17:52 GMT
Lasa famindra ara-politika avokoa ny hetsika rehetra eo amin'ny sehatry ny politika, na koa heverina ho ara-politika raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa manokan'ny ampahanà sangan'olona ara-politika iray. Izany indrindra no miseho eo amin'ny tontolon'ny politika sy ny tontolon'ny bilaogy Indoneziana ankehitriny. Niteraka fitroarana ny adihevitra mafana mikasika ilay drafitrasan'ny DPR (Solombavambahoakan'i Indonezia) hanova ny lalàmpanorenana mba hamadihana ny maripahaizana Lisansy ho zavatra takína mialoha hahafahan'ny mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho afaka tendren'ny antoko rehetra. Ary azo takarina izany rehefa hita fa tsy nahazo ny maripahaizana Lisansy akory ny iray tamin'ireo mpifanandrina ho filoham-pirenena natolotry ny antoko PDI-P, ilay filoha vavy teo aloha, Megawati Sukarnoputri.
Mino io hetsika io ho toy ny fomba iray hanakanana ny firotsahan'i Megawati ho fidina amin'ny fifidianana faobe manaraka amin'ny 2009 (pejy voafafa) i Terkini. Manao tsoakevitra i Atoa. Alfian Alfian anatin'ny fanadihadiany lava fa tsy tokony ho zavatra takína (rohy maty) amin'ny firotsahana ho mpifanandrina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny maripahaizana Lisansy satria hiteraka karazanà fomba fanao maloto hafa: ny laharana lava be ahitàna ireo mpanao politika te hahazo ilay Maripahaizana sy ireo anjerimanontolo sasany ”ratsy fanahy” izay vonona ny hamaly ny ”tinady” amin'ny alàlan'ny ”fantsona manokana sy vidiny miavaka. Miombon-kevitra amin'izany i ”Qui est votre..
Milaza ny iray miombon-kevitra amin'ilay drafitra fa raha toa ka lasa fepetra mialoha mba hahatongavana ho lohan'ny fileovana ny maripahaizana Lisansy, mandeha ho azy ny tokony hampiharana io lalàna io koa amin'izay mpilatsaka hofifidina ho filoham-pirenena.
Ny Solosaina finday sy ireo Solombavambahoaka Indoneziana (DPR)
Na dia tsy be lanja kokoa aza, toa mahaliana be ny tontolon'ny bilaogy Indoneziana ny olana mikasika ilay fikasan'ny DPR (Solombavambahoakan'i Indonezia) hividy solosaina finday ho an'ny mpikambana tsirairay ao aminy. Tsy latsaka ny 160 ireo lahatsoratra natokana (pejy voafafa) hiresahana mikasika izany olana izany.
Mifantoka indrindra amin'ny filàna sy ny sarany ireo adihevi-bahoaka momba io raharaha io. Raha ny momba ny sarany ohatra, hanokana 21 tapitrisa IDR (eo amin'ny Ar 7.424.025 eo) isaky ny solosaina ho an'ny mpikambana 550 ao amin'ny DPR ny governemanta. Saika tsy miombon-kevitra amin'izany solosaina ho an'ny DPR izany avokoa ireo bilaogera rehetra ary mametraka fanontaniana mikasika ny fahendrena ao ambadik'ity hetsika tsy mizy ilàna azy ity. Manontany tena amin'ny antony andanian'ny governemanta ny volam-bahoaka moramora ho an-javatra tsy misy dikany toy izao (pejy voafafa) i Just Ngeblog. Mitovy hevitra amin'izany koa i Rahning, i Pande Baik (pejy voafafa), i Rihart (rohy maty) sy ireo maro hafa.
9 ora izayHong Kong (Shina)